30kPa उच्च दबाव 29 m3/h वायु प्रवाह 48v रिंग ब्लोअर 10kw ईन्धन सेल को लागी 48v डीसी brushless बिजुली उच्च दबाव सास फेर्ने उपकरण प्रशंसक ब्लोअर को लागी प्रयोग गरीन्छ
डीसी brushless औद्योगिक प्रशंसक ब्लोअर एयर कुशन मिसिन/ईन्धन सेल/चिकित्सा उपकरण र inflatables को लागी उपयुक्त छ
एकाई आकार: D110*H107mm
स्थिर दबाव: 30kPa
WS145110-48-150-X300 ब्लोअर अधिकतम 29m3/घन्टा एयरफ्लो0kpa दबाव र अधिकतम 30kpa स्थिर दबाव मा पुग्न सक्छ। यो अधिकतम आउटपुट एयर पावर हुन्छ जब यो ब्लोअर 18kPa प्रतिरोधमा चल्छ यदि हामी 100% PWM सेट गर्छौं, यो अधिकतम दक्षता हुन्छ जब यो ब्लोअर 16kPa प्रतिरोध मा चलाउँछौं यदि हामी 100% PWM सेट गर्दछौं।अन्य लोड पोइन्ट प्रदर्शन PQ वक्र तल उल्लेख गर्नुहोस्:
(1) WS145110-48-150-x300 ब्लोअर ब्रशलेस मोटर्स र NMB बल बियरिंग्स भित्र छ जो धेरै लामो जीवन समय को संकेत संग छ; यस ब्लोअर को MTTF २० डिग्री सेल्सियस वातावरणीय तापमान मा ३०,००० घण्टा भन्दा बढी पुग्न सक्छ।
यो ब्लोअर व्यापक रूप बाट वैक्यूम मिसिन, ईन्धन सेल मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो ब्लोअर मात्र CCW दिशा मा चलाउन सक्नुहुन्छ।
ब्लोअर जीवन समय लामो बनाउन को लागी सकेसम्म कम पर्यावरण को तापमान राख्नुहोस्।
Q: के हामी यो केन्द्रापसारक हावा ब्लोअर सीधै धूल चुस्न को लागी प्रयोग गर्न सक्छौं?
A: यो ब्लोअर प्रशंसक प्रत्यक्ष धूलो चूस्न को लागी प्रयोग गर्न सकिदैन।
Q: काम गर्ने अवस्था फोहोर छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ?
A: एक फिल्टर दृढतापूर्वक ब्लोअर प्रशंसक को इनलेट मा भेला गर्न को लागी सिफारिश गरीएको छ
Q: कसरी ब्लोअर को शोर कम गर्न?
A: हाम्रा धेरै ग्राहकहरु फोम, सिलिकॉन ब्लोअर प्रशंसक र ब्लोअर आवाज इन्सुलेट गर्न को लागी मिसिन को बीच भर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस्।
श्रृंखला घाउ डीसी मोटर कम गति मा यसको उच्चतम टोक़ को विकास को लागी, यो प्राय: कर्षण अनुप्रयोगहरु जस्तै इलेक्ट्रिक लोकोमोटिभहरु, र ट्रामहरुमा प्रयोग गरीन्छ। अर्को आवेदन पेट्रोल र सानो डीजल इन्जिन को लागी स्टार्टर मोटर्स हो। श्रृंखला मोटर्स अनुप्रयोगहरु मा कहिल्यै प्रयोग गर्न सकिदैन जहाँ ड्राइव असफल हुन सक्छ (जस्तै बेल्ट ड्राइव)। मोटर गति को रूप मा, आर्मेचर (र यसैले क्षेत्र) वर्तमान कम हुन्छ। क्षेत्र मा कमी मोटर को गति को लागी कारण बनाउँछ, र चरम अवस्थामा मोटर आफैंलाई पनि नष्ट गर्न सक्छ, यद्यपि यो प्रशंसक कूल्ड मोटर्स (स्वयं संचालित प्रशंसकहरु संग) मा एक समस्या को धेरै कम छ। यो आसंजन को एक हानि को घटना मा रेलवे मोटर्स संग एक समस्या हुन सक्छ, जब सम्म चाँडै नियन्त्रण मा ल्याईएको छैन, मोटरहरु लाई सामान्य परिस्थितिहरुमा गर्न को लागी धेरै उच्च गति सम्म पुग्न सक्छ। यसले मोटर्स आफैं र गियर्स को लागी मात्र समस्या पैदा गर्न सक्दैन, तर रेल र पाels्ग्राहरु बीचको अन्तर गति को कारणले यो पनी रेल र पा wheel्ग्रा treads लाई गम्भीर क्षति निम्त्याउन सक्छ किनकि उनीहरु तातो र छिटो चिसो हुन्छन्। क्षेत्र कमजोर एक इलेक्ट्रिक वाहन को शीर्ष गति बढाउन को लागी केहि इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण मा प्रयोग गरीन्छ। सबैभन्दा सरल फारम एक contactor र क्षेत्र कमजोर प्रतिरोधी को उपयोग गर्दछ; इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण मोटर वर्तमान अनुगमन र सर्किट मा क्षेत्र कमजोर प्रतिरोधी स्विच जब मोटर वर्तमान एक पूर्व निर्धारित मूल्य तल कम हुन्छ (यो तब हुनेछ जब मोटर यसको पूर्ण डिजाइन गति मा हुन्छ)। एक पटक प्रतिरोधी सर्किट मा छ, मोटर यसको रेटेड भोल्टेज मा यसको सामान्य गति माथि गति वृद्धि हुनेछ। जब मोटर वर्तमान बढ्छ, नियन्त्रण रोकनेवाला र कम गति टोक़ उपलब्ध गराइएको छ बिच्छेद हुनेछ।
अघिल्लो: 3kw ईन्धन सेल को लागी मिनी टर्बो ब्लोअर
अर्को: सानो एयर केन्द्रापसारक पक्ष च्यानल ब्लोअर